Ambongadiny na aiza na aiza Set tenisy ambony latabatra miaraka amin'ny fanamboarana harato azo averina sy orinasa |XGEAR
XGEAR na aiza na aiza Ping Pong Equipment dia misy lahatsoratra harato azo averina, paddle ping pong 2, baolina 3 pcs, izy rehetra dia voatahiry tsara ao anaty kitapo misy tady fanampiny, ka mora entina rehefa mivoaka ianao.Ity kitapo tenisy latabatra portable ity dia afaka mipetaka amin'ny tampon-databatra rehetra.Ento miaraka aminao fotsiny izy ireo ary mientanentana.
Ny haratontsika dia mateza sy avo lenta, mafy ny fivoy miaraka amin'ny fingotra mahazaka, tsy ho vaky na ho vaky ny baolina.Tonga lafatra amin'ny fotoana mahafinaritra fa afaka manana lalao eo noho eo ianao mba hahafinaritra na ao an-trano, birao, efitrano fianarana ary lasy tsy misy fahasarotana amin'ny fametrahana eo ambony latabatra.
● Lisitry ny fonosana:Ny kitapo tenisy ambony latabatra XGEAR dia tonga miaraka amin'ny poste net azo averina, ping pong 3 (4mm ny savaivony) ary paddle roa miaraka amin'ny kitapo misy tady hitahirizana ity kitapo ping pong ity, mba hahafahanao mitazona ny singa rehetra miaraka.
● Ny harato maivana ampiasaintsika amin'ny paositra harato azo averina dia maharitra, mahatohitra ny fiantraika rehetra.Ny ping pong azo retractable miaraka amin'ny fanosehana ny lohataona naorina-in clamp, dia mety ny mifatotra amin'ny latabatra rehetra (ny sakany hatramin'ny 75'' ary ny hateviny dia 2'').
● Ny paddles dia vita amin'ny hazo mafy mipetaka mafy amin'ny tarehiny fingotra tsara indrindra, izay afaka manome fiarovana tsara, hafainganam-pandeha tsara kokoa ary fanaraha-maso ny fihodinana rehefa mamely ny baolina ping pong amin'ity paddle ity.Ny baolina tenisy ambony latabatra ABS dia tsy hikorontana na ho vaky rehefa milalao izany.
Fitaovana fototra ABS
endri-javatra Mora ny mametraka, azo antoka tsara tsy manimba ny latabatra ambonin'ny.
Lisitry ny Accessories Ao anatin'izany ny lahatsoratra harato azo averina, fivoy ping pong 2, baolina 3pcs (4mm ny savaivony) ary kitapo fanampiny.
Ny refin'ny entana (haben'ny boaty anatiny) L10.55" x W6.3" x H3.86"
Lanja entana 0,9kg
Haben'ny baoritra L19.1" x W1.83" x H19.7" (15pcs/box)
CartonGross Weight 14.5KG
Ny refin'ny vokatra
● 1. Mora apetraka miaraka amin'ny loharano ao anatiny ny lahatsoratra harato azo averina.Tsindrio fotsiny ny trigger, dia azo clamped mafy ny harato.
● 2. Na manao ahoana na manao ahoana ny endriky ny latabatra, ny haratontsika dia azo arovana tsara nefa tsy manimba ny latabatra (Ny halavan'ny harato dia mahatratra 75", ny hatevin'ny latabatra dia hatramin'ny 2 ").
● 3. Milalao amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza, na aiza na aiza!
Ny Set Tennis Table XGEAR dia azo entina miaraka amin'ny kitapo misy tady misy kojakoja rehetra ao amin'ny (post net azo itarina, ping pong bouncy 3, paddle 2).Ny fotoana mahafaly rehetra dia azo noforonina miaraka amin'ny olona ao amin'ny fianakaviana, namana, mpiara-mianatra, mpiara-miasa na olon-tsy fantatra sendra sendra.Na any an-trano ianao, na ao amin'ny gym, na amin'ny dia, fitsangatsanganana lasy, fitsangatsanganana, an-trano na any ivelany, dia safidy tena ilaina ho anao izany.
teo aloha: Seza sambo ambany lamosina Deluxe azo aforitra
Manaraka: Karazana an-dranomasina 600D 3 Bow Bimini Top Cover amin'ny habe samihafa ho an'ny sambo